सुगारिका केसीको नजरमा पढ्नै पर्ने ३ पुस्तक - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सुगारिका केसीको नजरमा पढ्नै पर्ने ३ पुस्तक
मेरो लाइफस्टाइल	|| 11 December, 2021
पूर्व मिस नेपाल तथा संचारकर्मी सुगारीका केसी पुस्तक प्रेमी हुन् । फर्सदको समयमा उनलाई पुस्तक पढ्न असाध्यै मनपर्छ । लकडाउनको बेलामा थुप्रै राम्रा राम्रा पुस्तकहरु पढेको उनी सुनाउँछिन् । जति काममा व्यस्त भए पनि हप्तामा एक दिन केही समय भने उनी पुस्तक पढ्नको लागि छुट्याउने गर्छिन् । उनको सिफारिसमा पढ्नै पर्ने ३ पुस्तक यस प्रकार छन् ः
सरस्वती प्रतिक्षाद्वारा लिखित नथिया पुस्तक मैले लकडाउनको समयमा पढेको पुस्तक हो । मैले पढेका पुस्तकहरु मध्ये यो पुस्तक एकदमै मन परेको थियो । यो पुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरु एकदमै सरल छन् । नेपाली समाजमा महिलाको भोगाई उनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण लगाएतका सबै कुरा समेटिएको छ । विभिन्न स्थानमा रहेको नारी कुप्रथा, त्यसभित्रको बेथितिलाई जिवन्तरुपमा चित्रण गरिएको उपन्यास ‘नथिया’ पछिल्लो समयमा लेखिएको नेपाली साहित्यको राम्रो कृति हो । त्यसैले यो पुस्तक सबैले एकपटक पढ्नै पर्छ जस्तो लाग्छ ।
इन्दिरा गान्धी बायोग्राफी
पुपुल जयकरद्वारा लिखित पुस्तक इन्दिरा गान्धी बायोग्राफी पनि मैले पढेका पुस्तकहरु मध्ये एकदमै मन परेको पुस्तक हो । यो पुस्तकमा एउटा महिलाले कति संर्घष गर्नु पर्छ भन्ने कुरा समेटिएको छ । र, देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनको लागि गान्धीले गर्नु भएको संर्घष एकदमै राम्ररी लेखिएको छ । यस पुस्तकमा पुपुल जयकरले गान्धी भित्र लुकेका धेरै व्यक्तित्वहरू उजागर गरेका छन् ।
हट, फ्ल्याट एण्ड क्राउडेड
हट, फ्ल्याट एण्ड क्राउडेड थोमस एल फ्राइडन्यानद्वारा लिखित पुस्तक हो । यो पुस्तक पनि असाध्यै राम्रो छ । फ्रिडम्यानले कसरी ग्लोबल वार्मिङ द्रुत रूपमा बढ्दो छ ? हामीले के के गल्तिहरु गरि रहेका छौँ ? जस्ले गर्दा वतावरण प्रदुषण बढेको छ भन्ने कुरा औंलाएका छन् । त्यसको साथै विश्वलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु पुस्तकमा समेटिएको छ । त्यसैले यो पुस्तक सबै युवाहरुले एक पटक पढ्नु पर्छ ।